Network cabinet, iro rinoshandiswa nokubatanidza hwakawanda Panel, kuti chivhariso-iri, ari chivhariso-mubhokisi, electronic zvinoriumba, mudziyo uye zvemaziso zvikamu uye zvinoriumba, kuti bhokisi installation. Maererano kuitika mhando, Server cabinet, rusvingo cabinet, nomumbure cabinet, mureza cabinet, akangwara musuo mhando panze cabinet uye zvichingodaro. Kukwanisa tsika dziri pakati 42U uye 2U.
Simple mamiriro, yakakunakira kuvhiyiwa, nemasango basa, zvinonyatsochengeta kukura, mari uye anobatsira;
- dzakawanda dzakakurumbira chena dzinopfavisa regirazi pamusuo;
Yokumusoro furemu pamwe dzeraundi maburi kufefetedza;
Panguva iyoyowo, kuisa vhiri uye kutsigira tsoka;
- apedze uchida nenhumbi.
The samambure cabinet rinoumbwa pepuranga uye pechifukidziro (musuo), iro kazhinji ane rectangular chimiro, uye anoiswa pasi. Inopa dzakakodzera zvakatipoteredza uye kuchengeteka nokuda chakaipa ichishanda zvigadzirwa michina. Izvi chete pashure gungano hurongwa pamwero. The cabinet kuti hauna namahwindo yakarongeka anonzi furemu.
Early rezvebonde cabinet kunyanya Nokukanda kana pakona kubudikidza sikuruwa, rivet kwakabatana kana welded kupinda chakafanana muhurumende, uye chakagadzirwa dzakatetepa simbi yairema pabutiro (musuo) uye. Mhando iyi cabinet riri guru, kura, nyore, yave chapedzwa. Nokushandiswa transistors, Integrated matunhu uye siyana zvinoriumba, mano Ultra tsindirana, nemamiriro ose cabinet ndiyewo diki, Dzokuvaka kutungamirirwa pakukura. Nemambure cabinet yambokurukurwa kuva dzakatevedzana chivhariso uye zvigadziko neumwe saizi. Pinza bhokisi, chivhariso-muurongwa peungano chinjikira uye wehunyambiri urongwa mhando mbiri. Kazhinji nemambure cabinet zvinhu inoshandisa dzakaonda simbi yairema, neimwe mhando muchikamu chimiro esimbi chikamu, kuti aruminiyamu Profile uye siyana youinjiniya mapurasitiki, etc .. In